Ukucocwa ngokubanzi: sihlambulula ilusu lobuso
I-Spring yithuba lokucoca okukhulu, xa sibeka umyalelo kunye nendlu kunye nathi. Eli lixesha elifanelekileyo lokuhlanjululwa kwesikhumba, eliye lalwela ubusika obude. I-skin epholileyo ibukeka ibhetele ngakumbi kunesikhumba esinezibonda ezibomvu, ubomvu kunye nezibhokhwe. Unako ukuya kwi-salon, kodwa unokwenza ngokwakho. Izindlela zokuba zibekwe kakuhle, wonke umntu unokukhetha akhe.
Le ndlela yindlela endala kunazo zonke. Unamathuba amaninzi kunye neentsilelo. Ukucoca kwincwadi kunokwenziwa ekhaya nakwi-salon, kufuneka nje ukwazi indlela yokwenza okulungileyo.
Ulusu lwethu luvelisa umlinganiselo othile wemfihlelo, eyona yinqanaba lokukhusela. Le yona yintsikelelo enqabileyo kakhulu, apho sisenza konke okusemandleni ethu ukukrazula. Kodwa ukusetyenziswa kweetonic, izihlahla, izicwisi kunye nezimonyo zokuqhathanisa kuphela kukhuthaza umsebenzi weengqungquthela ezithembekileyo, kunye naluphi na izimonyo ezinokuthi zivale iipores, zenze amachashaza amnyama . Enyanisweni, ngaphandle kokunyamekela kakuhle, ulusu alubukeka lungcono. Ngoko ke, ubuso kufuneka bahlambuluke nangayiphi na imeko, kodwa kungekho rhoqo kwinyanga.
Ngaphambi kokuba uqale inkqubo, kufuneka uhlambulule kwaye unciphise ubuso kunye nezixhobo ozisebenzisa rhoqo. Ingaba yi-gel yokuhlamba, i-lotion okanye itonic. Emva koko, isikhumba kufuneka sitshathwe. Kwi-salon, oku kuza kuba ngumphunga-mlilo okhethekileyo, kwaye kwikhaya kukho i-pot eqhelekileyo ngamanzi abilayo okanye i-decoction yemifuno. Ixesha ngalinye lihlulwe ngesandla. Ngendlela, le nkqubo inqatshelwe kulabo abanesifo esikhuselekileyo. Musa ukucoca ngeencwadana kunye neempahla ezikufutshane nesikhumba, kunye nokuthambekela kokuphilisa ixesha elide. Ukucocwa kwemihla ngemihla kunomonakalo omkhulu kwesikhumba, ngoko kukho umngcipheko omkhulu wokuvuvukala, ubomvu, kunye nokucoceka ekhaya.
Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukuphelisa ukungena kwamabhakteria kunye nemigqomo kwii-pores ezandisiweyo. Emva kokucoca, isikhumba kufuneka siphathwe nge-antibacterial agent, sebenzisa ukhilimu ocolileyo. Kufanelekile ukuba ukwazi ukuba le nkqubo ingenakulinganisela, kwaye ubomvu bunokuqhubeka kwiintsuku ezi-1 ukuya kwezi-3. Akukho imfuneko yokwenza uhlambuluko lobuso ngobusuku obusisiganeko esibalulekileyo
Ukukhawulwa kwindlela yokucoca ulusu, luphela lukhulu. Inkqubo ye-salon, ekhupha iindawo eziphezulu zeekatatini zesikhumba. Iqondo le-Laser likhupha i-skin relief, lisusa umgca ophezulu, uhlaziya. I-Chemical peeling yindlela yokwenza i-acids elukhumbeni, apho uluhlu oluphezulu lushushu. Zonke ii-pores zihlambulukile, kuba ii-acids ziphazamisa naluphi na ukungcola. Le nkqubo inokuba buhlungu kubabandezelekayo. Ukongezelela, kuncike kakhulu kumava enkosi. Kwizandla zengcali awuyiki ukutshiswa kweekhemikhali.
Le nkqubo ayihlambululi i-pores kakhulu, ngoko ayifaneleki wonke umntu. Ukucetyiswa kukucetyiswa ukuba kwenziwe phambi kwelanga elide ukwenzela ukuba ungabonakali ulusu kwi-radiation.
Inkqubo ye salon, efana nokucocwa kwencwadi, kuphela iminwe ithatha indawo yesoxhobo ngebhozi. Yakha i-vacuum, kwaye umbhobho uhlambulula kakuhle iipore, usebenza phantse nje nge-vacuum cleaner. Le nkqubo yenkqubo engenakubuhlungu, leyo ngexesha elifanayo linciphisa umngcipheko wexinzelelo lwesikhumba. Ukucocwa kwenkunkuma kuya kunceda ukuphelisa iingxaki kuyo nayiphi na indawo yesikhumba. Ukungqinelana kunokuthi kufumaneke ngokuthe ngqo kummandla weenqanawa zesikhumba.
I-ultrasound iyasetyenziswa ngokubanzi kwi-cosmetology, kuquka nokucoca ubuso. Ngaphambi kwenkqubo, isikhumba siphathwa nge-lotion ekhethekileyo, emva koko i-debris isusiwe nakwiindawo ezinzulu. Le nkqubo inceda ukulahla iiseli ezifile, kunciphisa ubunzulu benkinga . Enyanisweni, ufumana impembelelo emininzi kwinkqubo enye.
Kodwa le nkqubo inemibandela engqinelanayo, ngoko ke kufuneka kudityaniswe ngokubambisana kunye ne-beauautician. Akukhuthazwa ukuba uhlambuluke ubuso obunobunqamlezo kubasetyhini abakhulelweyo, ngeendlela ezinobungozi. Ukongezelela, le nkqubo ayihlanganisi nabanye.
Indlela yokucoca ubuso ixhomekeka kwizinto ezininzi-ngezinga lokungcola kwesikhumba. ukususela kwimimandla yayo kunye nokukhetha kwakho. Kufanelekile ukukhumbula ukunakekelwa rhoqo nokufanelekileyo. Sebenzisa ama-gel, ukuhlamba, iimaski kunye nama-lotions ekhaya, kodwa ungayeki isikhumba ekuphefumuleni, kwaye izigulane ezixilisayo zisebenza. Kubalulekile ukuyilawula, ungabakhuseli. Ukucocwa kufuneka kwenziwe kanye ngenyanga okanye ezimbini, kodwa kungekho ngaphantsi kwesinye rhoqo kwiinyanga ezi-5 ukuya kwezi-6. Emva koko isikhumba sakho siya kuhlala sihamba kakuhle kwaye sikhanyisa.
Silawula iminyaka yethu (sebenzisa ngaphambi kwexesha elidala)
I-dermatitis ye-allergen ebusweni
Ngaba imidlalo "yezesondo" yabantwana iyingozi?
Ukusetyenziswa kwe-valerian yeoli
Uhlobo lwemixube yabantwana kunye nemithetho yokukhetha kwabo
Imveliso yokwandiswa kolutsha
Indlela yokuziphatha kumntu onkosikazi
Indlela yokuzincama xa kukho iingcamango ezimbi
Kutheni ufuna ukufunda iifriythi zezingane
Siqokelela amaqhekeza esikolweni
Isondlo sabasetyhini abakhulelweyo
Iphutha elivuthiweyo: Indlela yokuyichaza lo mfanekiso kwiphupha